October | 2015 | bishnunmdc
उषा पक्कै झर्छिन् भोली , रात एक् बाच्न पाए
Posted on October 31, 2015 by bishnunmdc
भीर् हाम्रा वरपर
पाइला गनि चाल्नु पर्छ
डाँफे मयुर् नाच्न् छाडे
सृस्टि कहा बाच्न सक्छ् ।
मयुर् तिमी लेक चढी
हेर् बुकि फूल
चिरी देउ छाति मेरो
देख्यौ भने भूल् ।
छाति मेरो दुख्यो ऐले
लाला बाला भोकै रहे
उषा पक्कै झर्छिन् भोली
रात एक् बाच्न पाए ।
माटो फले देश हास्छ
देश् हासेँ मन्
प्याउली फुल्छ पाखा भरि
ढुक्क् हुन्छ तन ।
छाति मेरो फराकिलो
अन्तरिक्ष अट्न् सक्छ
मलाई तिमीले चिन्यौ भने
संसार् यही हास्न सक्छ ।
नेपाली नेपाली भाषि भुटानी हुन नपरोस्
Posted on October 28, 2015 by bishnunmdc
भुटानका नेपाली भाषि भुटानी लाई नेपाल भित्र भारत् ले जबर जस्ती ट्रक् मा कोचेर् छिरायो । तर् आफ्नो देस् मा फर्कन्छौ भन्दा देस् फर्कन भारत् ले दिएन् । नेपाली भाषी भुटानी आज् सरणार्थि बने। माटो बिनाका नागरिक् बने । नेपालीले यो कुरा किन बुज्दैनन् ? भारत् को छिमेकी प्रतिको निति राम्रो सँगा बिस्लेसन् गरौ। नेताहरु दिर्घकालिन् रुपमै सोचेर् काम् गर । नेपाल लाई बचाउन सबै नेपाली एक् हौ । माटो गुमे पछि खोजेर पाइदैन ।
यसपटक् दशै दलाल् लाई पनि दशा भो
Posted on October 18, 2015 by bishnunmdc
यसपटक् दशै दशा भो
मन् दिक्क अनि असान्त भो
सूनका कुरा छोडौ ,
नुन्, दाल्, चामल् , ग्यास्, तेल् सखाप् भो
सानालाई त थाहै थियो
पराधिनता के हो ? अरुलाई पनि थाह् भो
साना लाई बिचल्लि भो
यसपटक् दशै दलाल् लाई पनि दशा भो ।
हाँस्नुपर्छ देश अब हिमाल झैँ खुली
Posted on October 11, 2015 by bishnunmdc
पहाडमा हिरा झर्छ डर के को साथी ।
गर्नु पर्छ आँट अब दास बन्न हुन्न,
सार्वभौम सधैं हामी झुक्न कत्ति हुन्न ।
तितो मिठो खाउँला बरु आफ्नै सीपले लाउँला,
ढिलो भए होस बरु अमृत आफ्नै पिउँला ।
पीडा अब बोक्नु हुन्न राष्ट्रियता बिर्सेर,
कालो मसि चोब्न हुन्न स्वाभिमान बेचेर ।
ईमानले देश हाँस्छ पसीनाले माटो ।
नाच्नु पर्छ देश अब मयूर झैं झुली,
हाँस्नु पर्छ देश अब हिमाल झैं खुली ।
रचनामा प्रकाशित पुष–माघ २०७२
आमाको काखमा जस्तोसुकै दुख् पनि सुखै हुन्छ।
Posted on October 9, 2015 by bishnunmdc
Shishapangma & Dorjee Lhakpa from Cherkori-peak-4980m. Nov. 2011 P: Hem K
१२ वर्ष् पछि , १२ वर्ष् पहिले झै अक्टुबर् २०१५मा नेपालको मौसम् सफा भयो। नीलो आकास् र हिमाल् देखियो । येस भन्दा लगभग् १२ वर्ष् मौसम् मा आएको परिबर्तन्ले अक्टुबर् मा पनि ठुला दुर्घटना भएका थिए ।
यस वर्ष् महाभुकम्पले क्षेत् बिक्षेत् पारेकाले प्रक्रिति देवले नेपालमा पर्यटकको ओइरो लागोस् भनेर , नया सम्बिधान् संगै प्रगति गरोस् भनेर प्रक्रिति देव हासें ।
हिमाल् हास्यो , डाफे , मुनाल् र मयुर् नाचे । नदी र खोलामा उमङग छायो । (फोटो मा जस्तै)
Sunrise at Langtang Range from Langtang Village Nov. 2011 P: B
तर, भुकम्प ले हामीलाई दिएको भन्दा १००० गुणा बढि प्रताड्ना दियो भारत को क्रुर मोदि सरकार् ले । नाकाबन्दी भन्दैन् तर महा नाकाबन्दी गर्यो । नेपाली दाजु भाई को रगत् को नातालाई टुटाउन् खोज्दैछ् । हाम्रो घाटि अठ्याएर् हामीलाई नै लडाउदै छ् । तर, तेस्तो हुदैन्।
हामी सबै नेपाली निरास् नहौ । भारत् को दलाली गर्ने नेपालीलाई चिनौ। नेपाललाई एकताको मालामा गाँसि राखौ।
पारबाहन् हाम्रो अधिकार् हो । हाम्रो पीडा बिश्वो सामु राखौ । मोदिले हामीलाई कमजोर् पारेर, लडायेर् , कुल्चेर नेपाल्लाई टुक्रा पारेर हाम्रो प्राक्रितिक् सम्पती र सम्पदामाथी सदाको लागि कब्जा जमाउन लागेकोछ् । तेसो हुन नदिऔ ।
Langtang river and Langtang2from Langshisha Kharka Nov. 2011 P: B
सबै नेतामा रास्ट्रभाब् ,रास्ट्रप्रेम् उमार्न् प्रेरित् गरौ। आमालाई बचाऔ । आमाको काखमा जस्तोसुकै दुख् पनि सुखै हुन्छ। असोज् २२ ।
डटेर आमा खै म भन्नै सकिन ।
Posted on October 4, 2015 by bishnunmdc
१ . म सँगै तिमी छौ
र त् म जीबित् छु,
डारलाग्दा नङ्ग्रा , तिमी माथि रोपिदा
कसरी म हास्न् सक्छु ।
२ . लाचार् कति रहेछु म
प्रेम् मेरो तिमीलाई पोख्नै सकिन,
पराधीन् कति रहेछु म
सन्तान् म तिम्रो पनि भन्नै सकिन ।
३. लाबन्य रुप र् अपार् सम्पति तिम्रो
पहिचान् मैले खै गर्नै सकिन ,
ठूला बुट छातिमा बज्रदा तिम्रो
डटेर आमा, खै म भन्नै सकिन ।
१७ असोज् २०७२
तराई, पहाड् ,हिमाल् का सबै नेपाली एक् हौ
Posted on October 1, 2015 by bishnunmdc
कोशी, गण्डकी, माहाकालिमा ठगी इ सकेकाछौ । सुस्ता, मेची , पशुपती गण्डकको वालमिकि, लीपु, कालापानी जस्ता सीमा मिचीइसकेका छ्न् । हामी झगडा गरेको मौका पारेर् अब नदि , खोला, खानी , सीमा र राज्य मा नङ्ग्रा गाडन् मौका खोजदै छ्न् । होशियार् हामी बनौ ।